कागती खानुका फाइदैफाइदा: मुटु रोगबाट बचाउनेदेखि क्यान्सर लाग्न नदिनेसम्म ! «
कागती खानुका फाइदैफाइदा: मुटु रोगबाट बचाउनेदेखि क्यान्सर लाग्न नदिनेसम्म !
Published : 16 February, 2020 4:54 pm
कागती खानुका फाइदैफाइदा: मुटु रोगबाट बचाउनेदेखि क्यान्सर लाग्न नदिनेसम्म ! कागती स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी फल हो । स्वास्थ्यमा यसले पार्ने फाइदा र विशेष खालको स्वादका कारण कागती विभिन्न प्रकारका भोजनमा प्रयोग गरिन्छ ।
यसले तौल नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर क्यान्सर लाग्न नदिनेसम्मका काम गर्छ । खासगरी कागती मेक्सिको, भियतनाम र थाइल्याण्डमा लोकप्रिय छ।